Banyere Anyị - Beijing Anbesec Technology Co., Ltd.
Anbesec Technology Co., Ltd. hiwere na 2015. Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ a raara nye ntinye nke usoro nchekwa ọkụ na-akwụsị na nkwekọrịta ọrụ nchekwa ọkụ. Ka ụlọ ọrụ ahụ na-etolite, anyị akpọkọtala otu ndị ọkachamara ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ iji nye ndị ahịa ihe ngwọta injinia ọkachamara na ngwaahịa na akụrụngwa ọkụ dị elu.
Usoro ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ gụnyere: sistemụ ọkụ ọkụ obodo, sistemụ ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, sistemụ ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ na ngwa nchekwa ọkụ. Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. dị ka ngalaba nke Hong Kong Anbesec Technology Co., Ltd., na-akwado ọtụtụ ụlọ ọrụ ọkachamara ụlọ iji nye ngwaahịa na ọrụ dị elu maka ndị ahịa anyị, wee jiri ahụmịhe ahịa ahịa mba ụwa zuru oke nke Hong. Kong Anbesec iwebata akara ọkụ ọkụ ụlọ dị elu na ụwa niile.
Companylọ ọrụ anyị na-ekwusi ike na ụkpụrụ ọrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, Onye ahịa mbụ". N'ime ọrụ a na mpaghara a, ụlọ ọrụ ahụ enwetawo ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ a pụrụ ịdabere na ya na ndị mmekọ, ma rara onwe ha nye oge niile maka ngwaahịa na ọrụ dị n'ọhịa ọrụ.
Mmepụta ntọala rụpụtara ihe karịrị 28,000 Square Mita na mkpokọta. Ma nwee ihe ntinye 10 nke gụnyere usoro mmepụta LHD. Ngwaahịa kwadoro FM, UL. ma na-ere ya na ndịda Asia, Africa, mid-East na Russia.
Ihe niile Wan Wanna Mara Banyere Ngwaahịa Anyị